September 2014 edited September 2014 in CMS
drupal ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ? drupal ကို လေ့လာချင်လို့ ဘယ်ကစလေ့လာရမလဲ... ဘာတွေသိထားသိသလဲ..?
drupal ဆိုတာက PHP ကို အသုံးပြုပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ opensource CMS ပါ။
မှာ download ချနိုင်ပါတယ်။
Durpal ကို လေ့လာဖို့ စာအုပ်တွေကတော့ https://www.drupal.org/books မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
You can introduce yourself at Myanmar Drupal Group, they will happy to help you: https://groups.drupal.org/myanmar